Soosaarayaasha munaaradda birta xaglaha ah - Warshada munaaradda birta xagasha ee Shiinaha, alaab-qeybiyeyaal
25m 3-Lugaha Lattice Birta Isgaarsiinta Tower
Halkan ka fiirso, soo saaraha munaaradda isgaadhsiinta birta xagal ee ugu weyn, iibka iyo dhoofiyaha koonfurta china.warshada tooska ah, dammaanadda tayada. Xaqiijinta ganacsiga
Adeegyada naqshadaynta gaarka ah waa la heli karaa, HADDII WEYDII!!!
15m Galvanized Microwave Antenna Isgaarsiinta
Halkan ka hel, soo saaraha munaaradda isgaadhsiinta birta xagal ee ugu weyn, iibka iyo dhoofiyaha koonfurta china.
50m xagasha birta gacanta ee Tower Telecom Mobile
Halkan ka hel, soo saaraha munaaradda isgaadhsiinta ee ugu weyn, iibka iyo dhoofiyaha koonfurta china.Shiinaha warshada tooska ah,damaanad qaadka tayada.
25m Taawar Is-Taageerida Angular Telecom
20m Warshada Tooska ah ee Galvanized Angular Telecom Steel Towers
Soo saaraha munaaradda birta ee xirfadleyda ah ee Shiinaha, alaab-qeybiyaha iyo dhoofiyaha, Waxaan ku siinnaa adeegga munaaradda birta hal-joojin ee ugu xirfadda badan dhoofinta Dibadda, oo ku takhasustay soosaarka munaaradda isgaarsiinta birta iyo naqshadeynta.
35m CE Tawerka Telecom Steel Lattice ee Shahaadaysan
XYTOWER waa soo saaraha munaaradda birta ee Shiinaha, waxaanu ku siinaynaa adeegga munaaradda birta ee hal-joojinta ugu badan ee dhoofinta Dibadda, oo ku takhasusay soosaarka munaaradda isgaarsiinta.
Faah faahin dheeri ah si deg deg ah nagala soo xiriir!!!
Dhibaato kasta Fadlan nala soo socodsii!
60m Xagalka Birta Lattice Telecom Tower
XYTOWER waa soo saaraha munaaradda birta ee Shiinaha, waxaanu ku siinaynaa adeegga munaaradda birta ee hal-joojinta ugu badan ee dhoofinta dibadda, oo ku takhasusay soosaarka munaaradda isgaarsiinta birta.
60m Birta Angular ee Microwave Antenna Telecom Tower